China 3T chubhu yechando muchina fekitori uye vanotengesa | Herbin Ice Maitiro
Simba rinomhanya: 9.375 KW.
Ice zuva nezuva inogadzira kugona: 3000 kgs echando machubhu nemaawa makumi maviri nemana.
Ngatiregei kuverenga pamwe ne3T / zuva chubhu yechando muchina.
Saka mazuva ese, mutsauko wekushandisa magetsi i30x3 = 90KWH.
(105-75) x 3 x 365 x 10 = 328,500 KWH, ndiwo musiyano wekushandisa kwemagetsi mumakore gumi.
Kana vatengi vakasarudza yangu 3T / zuva chubhu chando muchina, ivo vachachengetedza 328,500 KWH yemagetsi mumakore gumi.
Kana mutengi akasarudza imwe yakashata tekinoroji yemuchina wechando, anoshandisa mari yakawanda kubhadhara iro risingabatsiri magetsi anoshandiswa, 328,500 KWH.
Yakawanda sei kune 328,500 KWH yemagetsi munyika yako?
328,500 KWH yemagetsi ingangoita US $ 45,000 muChina.
Pashure: 2T flake chando muchina
Zvadaro: 5T chubhu yechando muchina